राजधानीमा समुदायमै संक्रमण, तर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन सकेन | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more राजधानीमा समुदायमै संक्रमण, तर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन सकेन
राजधानीमा समुदायमै संक्रमण, तर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन सकेन
भदौ ११ गते, २०७७ - ०७:३२
काठमाडौं । समुदायस्तरमा संक्रमण देखिएको काठमाडौं उपत्यकामा बुधबार कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या चार हजार नाघेको छ । तर, सरकारले संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकेको छैन ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – राजधानीमा बुधबार थपिएका तीन सय एक संक्रमितमध्ये काठमाडौंमा दुई सय ३०, ललितपुरमा ४७ र भक्तपुरमा २४ रहेका छन् । योसँगै काठमाडौंमा तीन हजार एक सय ८५, ललितपुरमा पाँच सय १० र भक्तपुरमा तीन सय २४ जना संक्रमित पुगेका छन् । अहिले सक्रिय संक्रमित रहेका देशका ७५ जिल्लामध्ये काठमाडौं सबैभन्दा बढी संक्रमित भएको जिल्ला हो । उपत्यकामा महिनौंदेखि घर बाहिर ननिस्केका सर्वसाधारणलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. वासुदेव पाण्डेले काठमाडौं उपत्यकामा समुदायस्तरमै संक्रमण देखिएको बताए । ‘उपत्यकामा अहिले संक्रमितमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी समुदायकै हुन्, जसको कुनै ट्राभल हिस्ट्री पनि छैन, कोही त महिनौँदेखि घरमै रहेकाहरू पनि छन्,’ डा. पाण्डे भन्छन् । तर, यसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले परिभाषित गरेको जस्तो ‘लोकल ट्रान्समिसन’ भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘भारतमा समेत लोकल ट्रान्समिसन भएको भनिएको छैन, हाम्रोमा पनि त्यसरी भन्नचाहिँ मिल्दैन,’ डा. पाण्डेले भने ।
समुदायमै संक्रमण देखिए पनि सरकारले सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भने गर्न सकेको छैन । एकै दिन धेरैजनामा संक्रमण देखिन थालेपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा समेत कठिनाइ भएको डा. पाण्डेले बताए । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र उपत्यकाका स्वास्थ्य कार्यालयहरूले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न नसकेपछि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिइएको छ । ‘हामीले पनि सहजीकरण गरेका छौँ, तर आजकै कुरा गर्ने हो भने एकै दिन तीन सय एक जना थपिएका छन् । कसको सम्पर्कमा कति छन् ? कसरी छुट्याउने ?’ महाशाखा प्रमुख डा. पाण्डेले भने ।
जनशक्ति अभावका कारण कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको महाशाखा तथा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन,’ भक्तपुर स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख कृष्ण मिजारले भने, ‘हामीले सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण स्थानीय तहलाई पठाएका छौँ, त्यसपछिको व्यवस्थापनमा उहाँहरूको सक्रियता छ ।’ समुदायस्तरमा संक्रमण देखिन थाले पनि नियन्त्रणका लागि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्नेबाहेक अरू ठोस पहल भने गरेको छैन ।
संक्रमितबारे स्थानीय सरकार बेखबर
संघीय सरकारले कोरोना संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको जिम्मा सुम्पे पनि स्थानीय सरकार भने उनीहरूको पहिचान गर्नमै रुमल्लिएका छन् । उनीहरूलाई संक्रमितको वास पत्ता लगाउनै मुस्किल भइरहेको छ । ल्याबले संक्रमण पुष्टि गरेको दुई दिनपछि मात्रै स्थानीय सरकारले संक्रमितको विवरण पाउने गरेका छन् ।
उपत्यकामा सबैभन्दा बढी संक्रमित भएको काठमाडौं महानगरपालिकामा सोमबारसम्म एक हजार आठ सय ४० जना संक्रमित थिए । तर, मंगलबार र बुधबार कति संक्रमित थपिए भन्ने विवरण महानगरसँग पुगेको छैन । संक्रमित भएकामध्ये पनि को कुन वडामा बस्छन् भन्ने पूर्ण विवरण छैन ।
ल्याबबाट संक्रमण पुष्टि भएपछि रोग नियन्त्रण महाशाखा हुँदै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट स्थानीय तहसम्म विवरण पुग्नै दुई दिन लाग्ने गरेको काठमाडौं महानगरका कोभिड नियन्त्रण फोकल पर्सन ज्ञानबहादुर ओलीले बताए ।
सोमबारसम्मको अपडेट महानगरसँग आइपुगेको छ, मंगलबार कति संक्रमित थपिए ? अवस्था कस्तो छ ? हामीलाई जानकारी छैन,’ ओलीले भने ।
संक्रमण पुष्टि भएको दुई दिनपछि मात्रै स्थानीय तहले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम सुरु गर्छन् । काठमाडौं महानगरले संक्रमितको विवरण प्राप्त भएपछि टेलिफोनमार्फत संक्रमितको बसाइ र अवस्थाबारे एकपटक सोध्ने गरेको छ । फोन सम्पर्क नहुने संक्रमितबारे महानगर बेखबर छ ।
‘महानगरभित्र कति संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् भनेरसमेत यकिन गर्न सकिएको छैन,’ फोकल पर्सन ओलीले भने । उनका अनुसार सोमबारसम्म करिब तीन सय ९० जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् ।
महानगरसँग कति संक्रमित निको भए भन्ने पनि जानकारी छैन । ‘न बिरामीले निको भएँ भनेर थाहा दिन्छन्, न त अस्पतालले डिस्चार्ज भएको खबर गर्छन् । ल्याबले पनि रिपोर्ट नेगेटिभ आएको विवरण पठाउँदैन,’ ओलीले भने ।
टोखा नगरपालिकासँग पनि त्यस्तै समस्या छ । मंगलबार कति संक्रमित थपिए भन्ने विवरण बुधबारसम्म पनि टोखामा पुगेको छैन । स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख रण खुलालका अनुसार अहिले एक सय ३८ जना संक्रमित छन् ।
‘संक्रमितको जानकारी पहिले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा आउँछ, त्यहाँबाट छुट्टिएर यहाँ आउने एक दिनपछि मात्रै हो, कहिले त दुई दिन पनि लाग्छ,’ खुलाल भन्छन् । टोखामा ३५ जना होम आइसोलेसनमा बसेका छन् भने ६ जनालाई नगरपालिका आफैले निर्माण गरेको चण्डेश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा रहेको आइसोलेसनमा राखेको छ । तर, संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भने टोखाले पनि गर्न सकेको छैन ।
उपत्यकाका अन्य स्थानीय सरकारले पनि सबै संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकेका छैनन् । संक्रमितको संख्या चार हजार नाघे पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको संख्या भने दश हजार मात्रै पुगेको छ ।
उपत्यकामा १७ भदौसम्म निषेधाज्ञा
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा एक सातासम्म लम्बिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासनले १७ भदौसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेका हुन् । ‘हामीले सर्वपक्षीय छलफल गर्दा सबै पक्षबाट थप्नुपर्ने सुझाब आयोे,’ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भने, ‘एक साताको अवधिमा संक्रमण दर घटेको र दुई सातापछि धेरै कम हुन्छ भन्ने आशासहित एक सातालाई निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय भएको छ ।’
यसपटक निर्णय गर्नुअघि सबै स्थानीय तह, व्यवसायीलगायतसँग छलफल भएकाले थप कडाइ गरिने उनको भनाइ छ । ४ भदौदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको थियो । बुधबार निषेधाज्ञाको समय सकिएपछि फेरि थपिएको हो । यो अवधिमा पनि उपत्यकामा दैनिक दुई सयभन्दा बढी संक्रमित थपिँदै आएका छन् ।
कोभिडले प्रभावित हुँदै वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगी, १०८ वर्षीयासहित एक सय नौ वृद्धवृद्धाको मृत्यु
समुदायस्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन थालेसँगै सबैभन्दा बढी वृद्धवृद्धा प्रभावित हुन थालेका छन् । पछिल्लो एक महिनामा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउने वृद्धवृद्धाको संख्या अत्यधिक बढेको छ । बुधबारसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरूमध्ये ६२ प्रतिशतभन्दा बढी ५० वर्षभन्दा माथिका छन् ।
नेपालमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको झन्डै पाँच महिनापछि ४ जेठमा एकजनाको ज्यान गएको थियो । सिन्धुपाल्चोककी २९ वर्षीया सुत्केरीको मृत्यु भएको चार दिनपछि ८ जेठमा दोस्रो व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । उनी गुल्मीका ४१ वर्षीय पुरुष थिए । त्यसयता सरदर दुई दिनमा एक जनाको मृत्यु हुँदै आएकोमा साउनयता भने मृत्युको दर एक्कासि बढेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सरकारले तयार पारेको मृतकको सूचीअनुसार बुधबार साँझसम्म मुलुकभर एक सय ७५ जनाको कोभिडका कारण मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेहरूमा अधिकांश वृद्धवृद्धा छन् । साउन पहिलो सातासम्म ५० वर्षमुनिका उमेर समूहका मृत्यु हुनेको संख्या बढी थियो ।
तर, साउन दोस्रो साताबाट क्रमशः ५० वर्षमाथिको उमेर समूहका मानिसको मृत्यु बढ्दै गएको देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बुधबारसम्म मृत्यु भएका एक सय ७५ जनामा एक सय नौजना ५० वर्षभन्दा माथिका छन् । उनीहरू सबै दीर्घरोगी भएको जनाइएको छ ।
सरकारले तयारीविना लकडाउन खोल्नु र समुदायस्तरमा संक्रमण पुग्नुले वृद्धवृद्धाको मृत्युदर बढाएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । कोरोनाबाट २९ दिने शिशुदेखि एक सय आठ वर्षकी वृद्धाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए । तथ्यांकअनुसार २९ दिने शिशुदेखि २० वर्षसम्मका आठजना, २१ वर्षदेखि ४९ वर्षसम्मका ५८ जना र ५० वर्षदेखि माथिका एक सय नौजनाको मृत्यु भएको छ ।
वृद्धवृद्धामा मृत्युदर बढी देखिन थालेकाले सचेत रहनुपर्ने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. अधिकारीले आग्रह गरे । ‘कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा देखिएसँगै दीर्घरोगी र वृद्धवृद्धामा हुने संक्रमणसँगै मृत्यु पनि बढेको छ । यसले हामीलाई थप गम्भीर बनाएको छ । त्यसैले अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कनुहोला,’ डा. अधिकारीले भने । उनले घरबाट निस्कनै परे पनि मास्क, पन्जा र भौतिक दूरीको पूर्णपालना गरेर मात्रै निस्कन आग्रह गरे ।
एकै दिन ११ को मृत्यु, आठ सय ८५ संक्रमित थपिए
कोभिडबाट पछिल्लो २४ घन्टामा मुलुकभर ११ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि ५ भदौमा पनि ११ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार बुधबार देशभर आठ सय ८५ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै संक्रमितको संख्या ३४ हजार चार सय १८ पुगेको छ । बुधबारसम्म १९ हजार पाँच सय चारजना निको भएका छन् । पछिल्लो समय संक्रमित बढ्दै गएका छन् भने निको हुने दर घट्दै गएको छ । बुधबार देशभर एक सय ७० जना सघन उपचार कक्षमा छन् ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो २४ घन्टामा उपत्यकामा तीन सय एक संक्रमित थपिएका छन् । जसमध्ये काठमाडौंमा दुई सय ३०, ललितपुरमा ४७ र भक्तपुरमा २४ जना रहेका छन् ।
निषेधाज्ञापछिको सूचक पनि निराशाजनक
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न काठमाडौं उपत्यकामा ४ भदौदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । एक साता लामो निषेधाज्ञा बुधबार सकिएसँगै फेरि एक साता थपिएको छ ।
तर, निषेधाज्ञा भएपछिको सूचक पनि निराशाजनक रहेको छ । यो अवधिमा पनि परीक्षण बढाउँदा संक्रमित बढ्दै गएका छन् भने परीक्षण घट्दा संक्रमित पनि कम देखिएका छन् । कोरोनाबाट निको हुने दर घटेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या भने बढ्दै गएको छ ।
भदौ ११ गते, २०७७ - ०७:३२ मा प्रकाशित